राजनीति | सबैका लागि उपयोगी जानकारी।
Stalinist दमन देखि कितने मान्छे अझै पनि मरे?
स्टालनिस्ट दमनबाट कति जना मरे? यहाँ कति जना बच्चाहरू स्लाभिक मानिसहरूका जर्जियन बुबा हुन् ... सबै नष्ट भए। र जो यहाँ छन्, स्टालिनले भाडामा लिएको मार्सका पोकेमोन हुन्। उद्देश्यगत रूपमा गणना गर्न को लागी ...
सालिटीक श्सेनरनले भने: यदि एक व्यक्तिले देशभेदको बारेमा कुरा गरिसकेपछि, उसले चोरी गर्न चाहन्छ?
किन साल्टिक शेकड्रिनले भने: यदि व्यक्तिले देशभक्तिको कुरा गर्न थाल्छ भने ऊ चोरी गर्न चाहन्छ? देशभक्त चोरको हातमा एक मूर्ख हो। यो अधिकारी चतुर थियो। कहिले र कुन नौकरशाहलाई विश्वास भएन ...
यो के मतलब - अपोरोटी फ्याक्स?
ढुoned्गाको सियारको अर्थ के हो? गरीब फ्याउरो मारिएन, पेटमा डुबेको थियो, फोहरले भरिएका थिए, तर अब उनको सम्पूर्ण मानिस हाँसोमा उडाइसकेको छ थाहा छैन र विकीमा रूचि नराख्नुहोस् ...
किन Putin उपस्थितिमा धेरै परिवर्तन भयो?
के कारणले पुतिनलाई यत्तिकै परिवर्तन भयो? उमेर र तपाईं आफ्नो चित्रहरु मा हेर्नुहोस् ...। एरिसिप्लास राम्रो पोषणबाट फराकिलो भयो, तर निधार अझ सानो छ। कम्तिमा रसियामा केहि परिवर्तन हुँदैछ! हेजहग स्पष्ट छ ...
अलास्का। उनी कसले कान्छा हुन्?
अलास्का यो कससँग सम्बन्धित छ? रसिया अमेरिका। ईतिहास १ taught१० हजार वर्ष अगाडि साइबेरियन जनजातिहरूको समूहले इस्थमस (अहिले बेरिंग स्ट्रेट) पार गर्यो। एस्किमोस आर्कटिक तट, अलेट्स ... मा बसोबास गर्न थाले
क्षेत्रीय राज्य प्रणाली। यो बारेमा के प्रश्नको जवाफको रूपमा लेख्न सकिन्छ?
क्षेत्रीय राज्य संरचना। यो प्रश्नको उत्तरको रूपमा के लेख्न सकिन्छ? मलाई लाग्छ कि मैले बिभिन्न प्रकारको सरकारको बारेमा कुरा गर्नु पर्छ। सरकारका तीन प्रकार छन्: संघीय, ...
रूबल कसरी सुरक्षित छ? डलर कसरी सुरक्षित छ? सँधै सुन।
रूबलको ब्याक अप कसरी हुन्छ? डलरको के ब्याक अप भयो? सायद सुन। मानव विश्वास :)। तथ्य यो हो कि कागजका यी टुक्राहरू केहि लायक छन्। र अरू केहि छैन। फोर्ट नक्समा सुनको विशाल भण्डार छ, तिनीहरूले कति कभर गर्छन् ...
उग्रवादी को हो? चरमता के हो? चरमवाद आतंकवादको साथ किन चिन्ता छ?
कट्टरपन्थी को हो? अतिवाद भनेको के हो? अतिवादलाई किन आतंकवादसँगै मिल्काइन्छ? म क्रममा जवाफ दिनेछु। कट्टरपन्थी को हो? एक चरमपन्थी राजनीति वा सार्वजनिक जीवनमा चरम विचार र कार्यहरूको पालना गर्दछ, र कसरी ...
अहिल्यै कन्फिडरेट स्टेटहरू चाहिन्छ, उदाहरणहरू 10pcs, कृपया मद्दत गर्नुहोस्।
हामीलाई तुरुन्तै कन्फेडेरेट राज्यहरु चाहिन्छ, १० टुक्रा को उदाहरण, कृपया मद्दत गर्नुहोस्। केवल स्विजरल्याण्ड र त्यो नाम मात्र हो। जर्मनी, फ्रान्स, इटाली, स्विट्जरल्याण्ड, स्पेन, रसिया, चीन, भारत, क्यानडा, संयुक्त राज्य अमेरिका वर्तमान मा संघ राज्य हो ...
इजरायल र प्यालेस्टाइनबीचको संघर्षको कारण के हो?
इजरायल र प्यालेस्टाइन बीचको द्वन्द्वको कारण के हो? भगवानलाई मात्र थाहा छ)) इजरायली प्यालेस्टाइनको द्वन्द्वको धेरै लामो इतिहास छ जुन बाइबलीय समयदेखि शुरू भयो। यो क्षेत्र जसमा आधुनिक इजरायल अवस्थित छ ...
"स्लीपनिर" समूहले "उन्बेन्कन्टर सेलेड" गीत सुन्ने व्यक्तिहरूको नाम तपाईं कसरी राख्न सक्नुहुन्छ?
"स्लीपनिर" समूहले "उन्बेन्कन्टर सेलेड" गीत सुन्ने व्यक्तिलाई तपाईं कसरी नाम दिन सक्नुहुन्छ? हो, यो हाम्रो सिपाहीहरूमा बढी लागू हुन्छ। यो गीत एक सिपाहीको बारेमा छ किनकि यो शीर्षकमा छ, एक सैनिक मान्छेको बारेमा यदि ...
सामान्य यर्मोलो को हो? तपाईंले के गर्नुभयो? के लागि प्रसिद्ध छ? अधिक विस्तार मा!
जनरल एर्मोलोभ को हो? तपाईले के गर्नुभयो, केको लागि प्रसिद्ध छ? थप विवरण! ककेशसमा लडे ... सफलतापूर्वक ... शमिललाई समात्यो ... रूसको नायक ... तब रूसीहरूले एउटा सनक दिए। अन्या चेचेनोभ ... हो, मलाई याद छ, हरेक वर्ष ...
सद्दाम हुसैनलाई के भनिन्छ?
सद्दाम हुसेनलाई किन मृत्युदण्ड दिइयो? पिन्डोस्या स्लट नहुनका लागि। व्यक्ति नागरिकलाई मार्ने आदेश जारी गर्नका लागि। यो इराकका नागरिकहरूलाई युद्ध ग्यासका साथ विष मिसाउने आदेशको लागि, जसले धेरैलाई पासोमा राख्यो ...
सज्जन युक्रेनियनहरू ... र "स्विडोमो" को हुन् र उनीहरूले कसरी महिमा गरे ?? यो शब्द कसरी अनुवाद गरिएको छ ???
सज्जन युक्रेनियनहरू ... र "स्विडोमो" को हुन् र उनीहरूले कसरी महिमा गरे ?? यो शब्द कसरी अनुवाद गरिएको छ ??? आज यो शब्दको फरक अर्थ छ ... त्यसो त "Svidomo" को अर्थ के हो? Svdomy ...
लामा र अल्पाकाबीच कस्तो भिन्नता छ?
लामा र अल्पाका बीच के भिन्नता छ? लालामा दक्षिण अमेरिकामा शताब्दीयौंसम्म बोझको जनावरको रूपमा पैदा गरिएको छ, र अल्पाका यसको ऊनको बहुमूल्य गुणहरूको लागि हुर्काइएको छ। ला # 769 XNUMX;; मा (लामा ग्लामा) दक्षिण अमेरिकी स्तनपायी ...
कसले र रूसी सरकार गठन गरेको छ?
रूसी सरकार को र कसरी गठन गरियो? हामी रूसी संघको गठनको आधारमा रूसी संघको राष्ट्रपतिद्वारा रूसी संघको अध्यक्ष नियुक्त गर्दछौं। रूसी संघका उप प्रधानमन्त्रीहरू र संघीय मन्त्रीहरू नियुक्त हुन्छन् ...
टाटरस्टान रुस गणतन्त्र हो?
टाटरस्टान रुस गणतन्त्र हो? रसियाको एक क्षेत्र, केवल cors को गणराज्य भनिन्छ हो, स्टम्प स्पष्ट FEDERATIVE राज्य (ल्याटिन "संघीय संघ" बाट) दुई वा अधिक राज्य-क्षेत्रीय (वा राष्ट्रिय) को संघ हो ...
कसमरी को हुन्, कसरी deserter प्रशंसनीय छ निर्धारित गर्न को लागी?
एक डेजर्टर को हो, जब एक डेजर्टर सराहनीय हो कसरी निर्धारण गर्ने? यदि तपाईं एकाईबाट भाग्नु भयो भने, तपाईं एक डिजर्टर हुनुहुन्छ र यो सराहनीय छ! =) र यदि उसले युद्धका मैदानबाट आफ्ना साथीहरूलाई छाड्यो ...
राज्यको बजेट छ
राज्यको बजेट भनेको राज्यको बजेट भनेको राज्य र आर्थिक स्वामित्वका सबै प्रकारका व्यक्तिहरू र व्यक्तिगत नागरिकहरू बीचको आर्थिक सम्बन्ध हो जुन कार्यान्वयनका लागि विनियोजित कोषको केन्द्रीकृत कोषको गठनको सम्बन्धमा ...
कुन परिस्थितिमा पोल्याण्डले छाड्यो र रूसी साम्राज्यको संरचना?
कुन परिस्थितिमा पोल्याण्ड रूसी साम्राज्यको हिस्सा भयो? करिडोरमा मेरो छिमेकी जहिले पनि झगडा शुरू गर्दछ जुन म तपाईं सबैको लक्ष्य गर्दछु। जब हामीले वारसा लिएका थियौ, तिमी डायपरमा थियौ।
71 सेकेन्डमा उत्पन्न डाटाबेसमा 0,449 प्रश्नहरू।